Madaxweynaha Galmudug oo sheegay shirka Dhuusamareeb in uu ku dhicidoono waqtigii lagu talagalay. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR GALMUDUG Madaxweynaha Galmudug oo sheegay shirka Dhuusamareeb in uu ku dhicidoono waqtigii lagu...
Madaxweynaha Galmudug oo sheegay shirka Dhuusamareeb in uu ku dhicidoono waqtigii lagu talagalay.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) oo safar shaqo u jooga dalka Turkiga ayaa sheegay in shirka Dhuusamareeb uu dhici doono xilligii lagu balamay, oo ku began 15 bishan Agoosto .
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug oo qudbad ka jeedyay kullan eek u soo dhaweyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Istanbul ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga fogaado wax kasta oo wax u dhimi kara shirka Dhuusamareeb 3, lana tixgeliyo reer Galmudug.
Previous articleWasiirka Caddaaladda: “Baaritaan ayaan ku sameyneynaa Weerarkii Xabsiga dhexe.
Next articleRa’iisul Wasaaraha dalka Lebanon oo is casilay.